Ihe Nke ： KW-1903
Ihe ： 8% Spandex 92% Polyamide
E ji mara ： Skin-Enyi na Enyi / mgbochi ndọlị / ekwedo /
Ejiri Maka: Swimsuit
Ngwaahịa ngwaahịa Uwe eji akwa uwe
Ihe onwunwe 92% Naịlọn 8% Spandex
Ibu ibu 310GSM
Seersucker bụ mbipụta nke owu nwere ụfụfụ na crepe. E nwere ọtụtụ dị iche iche nke ịcha ọcha, agba nkịtị, akwụkwọ na agba agba agba. Ọ na-ekuru ume ma dị mma iji yikwasị. Ọ dịghị mkpa ịkpụchaa ya mgbe asachachara ya. Okwesiri maka akwa umuaka, uwe elu nwanyị, uwe mwụda, pajamas, wdg. Amfụfụ bụ ojiji nke eriri ndị na-agbasa ma na-ada mbà mgbe ekpughere alkali. Seersucker enwetara site na ibipụta alkali ozugbo na akwa owu a na-akpọ alkali seersucker, nke a makwaara dị ka ọdịnala ọdịnala; a na-ebipụta seersucker na resin mgbochi na akwa akwa, na ihe ọhụụ a na-ewepụta nke lye. Okwu e ji na-ebi akwụkwọ na dye ọrụ bụ resin seersucker.
A na-eji ogwe osisi abụọ dị iche iche, eriri ala na afụ, iji akwa. Yarn ahụ na-agbọ ụfụfụ nwere ụdọ yarn na-agba agba ma gbapụ ọsọ dị ihe dị ka 30% karịa nke ala ahụ. Ya mere, na akwa ahu na-etolite concave na convex egosipụta mgbe a na-akwa akwa na agba ntụ. Mgbe emechara ya, ọ ga - aghọ ihe ọhụụ. A na-ejikarị eriri yarn-acha agba agba agbawapụta usoro a, gụnyere owu niile, eriri dị ọcha ma ọ bụ ngwakọta kemịkal.
Dịka ọmụmaatụ, yarn ma ọ bụ akwa yart dị n'etiti polyester na owu na-akpa ma na-edozi ya na sodium hydroxide solution. Dị ka eriri owu na-ebelata karịa eriri polyester, ahụ akwa ga-etolite egosipụta afụ; ihe atụ ọzọ bụ iji akwa polyester dị elu na polyester nkịtị na ogologo ogologo. A na-esi akwa akwa akwa n'ime ndokpọ ahịhịa ndozi n'usoro weft ma ọ bụ na ntanetị. Mgbe ọgwụgwọ okpomọkụ, akwa ahụ na-etolite egosipụta concave-convex n'ihi ọnụọgụ nke ikpo ọkụ dị iche iche nke eriri abụọ ahụ.
Ngwongwo nke seersucker bụ nke owu na-acha ọcha ma ọ bụ polyester / yarn owu, na njupụta nke afụ na-adị elu karịa nke ala ahụ, ma ọ bụ na-eme ka afụ na-eme ka eriri na-eme ka a na-eme ya. Mgbe ị na-ekwe ákwà, olu a ga-ewepụta nke afụ ka ukwuu karịa nke ala ahụ, mgbe ahụ a na-esiji akwa sel na - achazi ya ma na - arụ ọrụ nke ọma iji mepụta ọmarịcha afụ. Jiri ụkpụrụ nke eriri eriri na-ezute na-etinyekwu lye ka ọ dịkwuo dayameta ma belata ogologo.
Seersucker bụ akwa owu nwere ọdịdị pụrụ iche na ụdị ịke, nke ejiri muslin dị mkpa. Uwe elu akwa ahụ na-egosi obere egosipụta na edo na oke adịghị ike, nke na-adịghị nso ahụ mgbe ị na-eyi ya, ma nwee mmetụta dị jụụ. Okwesiri maka ụdị uwe ejiji ụmụ nwanyị niile. Uru dị na akwa nke seersucker bụ na ọ dịghị mkpa ka ha ghaa ha mgbe ha sachara, mana ọghọm bụ na afụ ga-eji nwayọ nwayọ nwayọ Karịsịa mgbe ị na-asacha, ọ bụghị ihe amamihe dị na iji mmiri ọkụ ka ị banye, ma ọ bụ na-ehicha ma na-agbagọ ike, ka ị ghara imetụta ngwa ngwa afụ ahụ.
Nke gara aga: Soft Recycled Polyester RPET Pet Mesh Milky Jersey Fabric Mere Site Recycled Plastic Karama N'ihi T-uwe elu egwuregwu
Osote: RPET Sweat 87% polyamide 13% spandex Lycra Cotton Feeling Jacquard Custom 4 Way Stretch Printed Recycled Legging Fabric
Jacquard akwa mmiri na-acha odo odo ， Seersucker uwe mmiri mmiri ， polyamide akwa